Ihhovisi Lakho, Ikheli Lakho, Umkhiqizo Wakho | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 19, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Ngehlobo eledlule ngethule ibhizinisi lami ngokugcwele. Kube uhambo oluhle kakhulu ngezikhubekiso ezimbalwa kepha eziningi, eziningi ziyanqoba endleleni. Njenge ibhizinisi elincane, Ngisebenza kanzima ukufeza izinto ezintathu:
Yenza ekuzibandakanyeni kwethu ngokuletha ngokweqile, ukukuqedela ngesikhathi nangaphansi kwesabelomali. Le yinselelo enkulu, futhi ebesingahlangani nayo njalo. Ngezinsizakusebenza ezincane, ukubukela phansi umsebenzi owodwa kungaba nokuphendula okwenziwa ngamaketanga ngakho-ke sisebenza kanzima ukweqa okulindelwe.
Ukusebenzisa amathuba okukhula. Sinqaba umsebenzi othile, kepha asikunqeni ukuzibophezela kumaphrojekthi amakhulu. Sizothola izinsizakusebenza, sizothola ochwepheshe… sizowenza umsebenzi wenziwe. Angifuni ukwamukela umsebenzi osibeka engcupheni - kepha ngifuna ukwenza umsebenzi obekela izinsiza zethu inselelo. Lokhu kungukhiye kithi ekukhuleni ngolaka nokwenza lokhu kube real Ibhizinisi.
Yenza konke okusemandleni ukusungula umkhiqizo wethu njenge- real ibhizinisi ama-ejensi namanye amaklayenti abangabheka kulo lapho befuna ukuzibandakanya kwesikhathi eside, nokusebenzisana.
A real ibhizinisi? Uma ungaqiniseki ukuthi ngiqonde ukuthini ngalokho, ngiqonde ukuthi sizokwakha ibhizinisi elaziwa amaklayenti ethu namathemba abangathembela kuwo. Angifuni ukuthi amathemba ethu akhathazeke ngokuthi singavala kalula iminyango kusasa ngoba ngisebenza ngocingo oluphathekayo kanye nehhovisi lami lasekhaya.
Namuhla, ngisayine isivumelwano sokuqasha unyaka owodwa esikhaleni sokuqala sehhovisi lethu. Kuse- I-120 Market Street. Ngikhethe indawo ngoba iseduze kwayo ne-Circle, ikheli layo elizinze e-Indianapolis, nokubukeka kwayo okuhle nokuzizwa kwayo. Ngifuna ukuthi amathemba ethu namakhasimende ethu akwazi ukusivakashela esikhaleni esinamagumbi amaningi (amakamelo ezinkomfa ayi-12, elilodwa phansi), anendawo yokukhula (indawo yethu ingangena kahle ku-4 kuye ku-6) futhi kuyabukeka ukuhlaba umxhwele. Ngiyasithanda isikhala esisikhethile (sikwi-Suite 940 kusuka ngoMeyi 1).
Akusadingeki ngitshele amathemba ukuthi ngikhona ukusebenza ngaphandle kwendlu futhi angabaza ngokuzinikela kwami ​​ebhizinisini. Akusadingeki ngisebenzise iGreenwood (yize ngilithanda idolobha) ekumaketheni nasemaphepheni, manje sesinebhizinisi elizinze e-Indianapolis.
Silapha ukuhudula isikhathi eside, siyingxenye yedolobha, futhi sibheke phambili ekukhuliseni ibhizinisi lethu kulesi sikhala iminyaka embalwa. Sizoba nephathi yokwamukela ngesinye isikhathi ngenyanga ezayo futhi sethemba ukuthi ungaphumelela!
Tags: Umgwaqo u-120 e wemaketheagencyumbuthanoDK New Mediaindianapolisindianapolis agencyindilinga lesikhumbuzoi-ejensi yezindaba entshaihhovisi
Izimfihlo Zokukhiqiza: Ubuchwepheshe Abuhlale Bungobuchwepheshe
Ngo-Apr 19, i-2010 ku-9: i-34 PM
Ukuhalalisela okukhulu kuwe nakuyo yonke imizamo yakho. Ngiyakutshela ukuthi ngizokuthemba ngebhizinisi lami ngaphambi kwamanye amabhizinisi amaningi engiwaziyo okwamanje. Ngiyavuma, ukuba nehhovisi langempela nekheli "langempela" kungasiza isithombe sakho nomkhiqizo wakho ngaphandle kokungabaza. Ingabe kuyisidingo ukuthi sithathwe ngokungathi sína njengebhizinisi? Ngicabanga ukuthi bekuyiqiniso kakhulu eminyakeni eyedlule, kepha namuhla kufanele yamukelwe njengengadingeki. Isithiyo sinzima impela, kepha okulindelwe kwangempela kufanele kube ukuletha imiphumela, yomibili oyenzayo ku- # 1 naku- # 2. Besingenalo “ihhovisi” iminyaka engaphezu kwengu-4, futhi sisaqhubeka nokwenza esikwenzayo nokunakekela amaklayenti.
Ngo-Apr 20, i-2010 ku-6: 49 AM
Siyakuhalalisela ngokuhamba okukhulu! Ngisebenzisana nezinkampani ezihamba ngalokhu njalo. Kungaba ngokomzwelo nokucindezela! Kusamele ngithole inkampani ezizisolayo ngokuthatha indawo yokuqala yehhovisi nokuthi yenzeni ngebhizinisi labo. Kufanele ulandele lokhu ezinyangeni eziyi-6 ukusazisa ukuthi kukuthathe kuphi!
Ngo-Apr 20, i-2010 ku-7: 21 AM
UTHANDA indawo yakho entsha! Impumelelo enkulu kuwe, Doug.
Ngo-Apr 20, i-2010 ku-9: 01 AM
Siyakuhalalisela ngesikhala sehhovisi uDoug! Ngiyazi ukuthi uzokujabulela ukubuyela edolobheni futhi!
Ngo-Apr 20, i-2010 ku-12: i-39 PM
Halala! Amahhovisi amahle!
Ngo-Apr 20, i-2010 ku-6: i-45 PM
Umbuzo engizowubhekisisa unyaka olandelayo, Jason! Angazi ukuthi 'kuyimfuneko' kepha kuyawuguqula umbono wenkampani lapho ngikhuluma namakhasimende amakhulu. Ikhono lokuba nabo ngaphakathi endlini ukuze benze izingqondo ezithile noma ukwakha amasu kuzoba wusizo olukhulu! Angicabangi ukuthi bebefuna ukuhlala egumbini lami lokuphumula. 🙂
Ngiyabonga Chris! Ngiyawazisa amazwi esikhuthazo - lezi izikhathi ezisabisayo!
Ngo-Apr 21, i-2010 ku-1: 43 AM
Siyakuhalalisela ngesikhala esisha. Ngiyasithanda isakhiwo. Yikho kanye okufanele ukwakhiwa kwamahhovisi amabhizinisi amancane. Kupholile, kulula, futhi kusondele kuyo yonke into .. Uzoba nini nendlu yakho evulekile ukuze sikwazi ukuyiphula, ngesitayela?